Iskuduwe caafimaad oo Saylici u qabyaalad sheegtay oo si sharafa xilka u wareejay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Iskuduwe caafimaad oo Saylici u qabyaalad sheegtay oo si sharafa xilka u wareejay
Iskuduwihii caafimaadka ee gobolka Awdal Dr Maxamed Xaaji Cumar Yaabe oo bulshada gobolka Awdal si fiican u taqaano wax qabadkiisa cidna loo sheegayn ayaa si sharafa ku wareejay xilka uu hayay KELIYA 5 bilood iyo badh.
Saylici oo reer Awdal ku khasaareen keliyana ka shaqeeya sidii reeraha madaxa uu iskugu gelin lahaa ayaa hore diidey magacaabista Dr Yaabe bilo kahor wuxuuna wasiirkii caafimaadka ee xilligaa ka dalbadey inuu bedelo.
Wasiirkii hore ee caafimaadka ee mamulka Muuse Biixi ayaa ku furtuurey inuu bedelo warqadii uu ku magacaabay.
Markii wasiirkii caafimaadka jagada ka degayna waxa Muuse Biixi ka aqabalay Saylici inuu jagadaa u dhiibo nin ay isku jufo yihiin. Warqadii ugu horeysay wasiirkaa ay isku jufada yihiin Saylicina uu qoro ay ahayd inuu ka aargoosto iskuduwe Yaabe oo dhuunta u galay.
Waxase shaki la’aana inaanu waxba u dhiman sumcada reer Awdal ku barteen Dr Yaabe iyo weliba hawsha baaxada leh ee uu qabtey gobolka halka Saylici oo lagu khasaaray ay xataa kuwii doortey ka waayeen garab oo keliya xilliga doorashada uu yiraa tola’ay reerkoow.
Hoos ka daawo Dr Yaabe oo xataa salaamaya Saylici